स्वर्णिम वाग्लेको अतृप्त अवसर लोकार्पण – khabarmala.com
Newportalmala ८ जेष्ठ २०७९, आईतवार १४:२१ No Comments
काठमाडौँ- विख्यात अर्थशास्त्री एवम् लेखक स्वर्णिम वाग्लेको पुस्तक अतृप्त अवसर सार्वजनिक गरिएको छ । काठमाडौँको बबरमहलमा आइतबार आयोजित एक विशेष समारोहमार्फत पुस्तक लोकार्पण गरिएको हो । नेपाली कांग्रेस नेता एवं सांसद् गगन थापा, राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य उषा झा र लेखक वाग्लेले पुस्तक लोकार्पण गरे ।
‘पुस्तक सरकार सञ्चालनसँग गाँसिएका नीति, बजेट र आयोजनाबारेको टिप्पणीमा आधारित छ । नेपालको दीर्घकालीन विकास रोडम्यापमा अन्तर्निहित सोच, मान्यता र दर्शनबारे पुस्तकमा अभिव्यक्त विचारले हाम्रो समाज र आगामी सरकारहरूलाई दिशानिर्देश गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘तथ्यसङ्गत तर्क र प्रक्षेपण त हुन्छन् नै, युवा पुस्ताले पर्न सक्ने भर, लिन सक्ने प्रेरणा र बोक्न सक्ने आशा उनका लेखहरूमा म पाउँछु ।’
नेपालको इतिहासमा जुद्धशमशेरपछि अपूर्व अवसरकासाथ केपी ओली नेतृत्वको सरकार आएको उल्लेख गर्दै लेखक वाग्लेले यस्तो अवस्थामा पनि सोचेअनुसार गर्न नसक्नु नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको धारणा राखे । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारका अवसर र उनका समयमा गर्न सकिने तर नगरिएका विषयलाई आफूले पुस्तकमा समेटेको लेखक वाग्लेको भनाइ छ । साथै नेपालको विकासका लागि अपनाउन सकिने विकासको मोडल र पद्धतिका विषयलाई पनि आफूले पुस्तकमा समेटेको वाग्लेले बताए । बोलीचालीको सरल एवम् सहज भाषामा आफूले लेख तयार गरेको र तिनलाई सर्वसाधारणले समेत बुझ्ने तहमा प्रस्तुत गर्ने जमर्काे गरेको उनले जानकारी दिए ।
२५ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा सक्रिय वाग्ले विश्व बैङ्क (वासिङटन) र युएनडिपीमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री रहिसकेका छन् । उनी काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट सदस्य एवम् सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन संस्था (आइआइडिएस)का अध्यक्ष छन् । सन् १९९० को एसएलसीमा नेपाल दोस्रो (बोर्ड सेकन्ड) भएका वाग्लेले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको मन्त्रीस्तरीय नेतृत्व गरेका छन् । अर्थशास्त्र, राजनीति र इतिहासमा प्राज्ञिक रूचि राख्ने वाग्लेले विश्वका ६० देश र नेपालका सबै क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् ।
पुस्तक फाइनप्रिन्ट बुक्सले प्रकाशनमा ल्याएको हो ।
Previous Previous post: किन नेपालमा विधार्थीहरु नेपालमा बस्न चाहाँदैनन ?
Next Next post: पाँच महानगर र ३ उपमहानगरमा नतिजा आउन बाँकी कहाँ कसको अग्रता
अमेरिकाको टेक्सासमा ट्रकभित्र ४६ जना आप्रवासीको शव भेटियो ८ जेष्ठ २०७९, आईतवार १४:२१
राजदूत आचार्यलाई आयरल्याण्डको पनि जिम्मेवारी ८ जेष्ठ २०७९, आईतवार १४:२१
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, नेकपा एसका मन्त्री फेरिए ८ जेष्ठ २०७९, आईतवार १४:२१
एनआरएनएको स्वास्थ्य सम्मेलन सेप्टेम्बरमा ८ जेष्ठ २०७९, आईतवार १४:२१
गायिकाको शंकास्पद मृत्यू : दिलमायाको हत्या पछि कोठाबाट भाग्ने व्यक्ति को हुन ? ८ जेष्ठ २०७९, आईतवार १४:२१
प्रधानमन्त्रीद्वारा नेकपा एसका मन्त्री हेरफेर ८ जेष्ठ २०७९, आईतवार १४:२१